Hiran State - News: Dalka Britin oo ay ku sii qulqulayan wafuud ka kala socota aduunyada si ay uga qeyb galaan.
Dalka Britin oo ay ku sii qulqulayan wafuud ka kala socota aduunyada si ay uga qeyb galaan.
London:(hiranstate.com)-Dalka Britian waxaa ka socda xaflad Aroos ah waxaana lagu casuumay in ka badan 40 wadan oo ay ku jiraan wadamada ay dalkooda ka jirto amaba ka taliyaan boqortooyada sida Burunaayo, Marocco, Taylaan. sidoo kale waxaa lagu casuumay inta badan madaxweynayaasha aduunka siiba kuwooda calaqaadka la leh dalkaasi Britian.
Sidoo kale waxaa lagu casuumay fanaaniin ay ka mid yahiin Mr. Bean iyo Alton J. dhinaca ciyaaratooyda waxaa lagu casuumay D Bekham iyo Xaaskiisa Vitoria. sidoo kale waxaa lagu casuumay masuuliyiin badan oo dalkaasi Britian ka ah MP kuwaasi oo iyaguna ku casuumay shirka qeybaha kale ee bulshada amaba dadka iyaga ay aadka iskugu dhaw yahiin. hadaba jaaliyada Somalida waxaa ka mid ah dadka ay madashaasi ku casuumeen MPyada Amb Xooshow oo isagu ku nool dalkaasi UK oo la sheegayo inuu si weyn ugu xiran yahay mid ka mid ah xisbiyada dalkaasi Ka jira ee siyaasada saaxiibo badana ku leh MP yada wadankaasi, waxuuna xafladasi kala qeyb galayaa rag ay saaxibo yahiin.
Sidoo kale waxaa kale oo la sheegayaa iney jiraan dad badan oo African ah oo dalkaasi Britian ku nool oo ay Somalidu ku jirto oo xafladaasi siyaabo kala duwan uga qeyb galayo oo ka mid noqon doona dadweynaha u daawasho tagi doona qaabka ay u dhaceyso xafladaasi oo loogu magac daray Arooskii qarniga 21aad. hadaba waxaanu isku dayi doonaa in aanu arimahaasi ka wareysano Amb.Xooshow qaabka iyo sida uu xafladaasi uga qeyb galayo iyo jiritaanka arintaani.
· admin on April 24 2011 13:00:21 · 0 Comments · 1791 Reads ·
14,579,391 unique visits